မောင့်အကြိုက် – Nya Hmwe Pann
ကျနော့်နာမည်က သားထက် . . . အသက်က ၂၅ အခုဖြစ်တဲ့ဆော်ကြီးက အသက် ၄၀လောက်ရှိပြီ. . အသက်ကြီးတဲ့ဆော်တွေပိုကြိုက်တော့ ကွက်တိပေါ့. သူ့ နာမည်က မသီရိ…အပေးကလဲ လွှတ်ကောင်းဗျာ. ထန်လဲထန်ဆိုတော့ ကျနော့် အကြိုက်အမုန်းလိုးတာ အားရပါးရကို သူကလဲ အံကြိတ်ခံ… ဒီလိုနဲ့ တနေ့အိမ်ကလူတွေ အကုန်ဘုရားဖူးထွက်တဲ့နေ့ သူနဲ့ ချိန်းပြီး အိမ်ကိုလာဖို့ ပြောတော့ တယောက်ထဲဆိုမလာရဲ့လို့ သူ့ သူငယ်ချင်းခေါ်လာရင်ဖြစ်လားတဲ့… ရတရ်ခေါ်လာဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ ည၆နာရီလောက်ကျတော့လာပါလေရော. .
သူ့ သူငယ်ချင်းကလဲ ရွယ်တူလောက်ပဲသူနဲ့ က မသင်ဇာတဲ့ ကျနော့်ဆော်လိုပဲအကိတ်ကြီးဗျ တခုလတ်တဲ့ အိမ်ထဲရောက်တော့ TVကလာတဲ့ ကိုရီးယားကားခဏကြည့်ရင်းကနော် ကျနော့်ဆော်ကြီးက ပျင်းတယ်သောက်ရအောင် ဆိုတာနဲ့ ထွက်ဝယ်ရတော့တာပေါ့. ကျနော်လဲအကြံနဲ့ လေ… BLACK SHIELD တွေချည်း ဝယ်ချလာလိုက်တယ်. . အိမ်ရောက်တော့ တီဗီရှေ့ မှာမတွေ့ တာနဲ့ ရှာရင်း ကျနော့်အခန်းထဲသူတို့ ကအဝတ်ဝင်လဲနေတာနဲ့ တိုးရောဗျာ. . . ညဝတ်လဲတာက ဂါဝန်လိုမျိုးကိုမှ ဖင်တခြမ်းလောက်ပဲ ဖုံးတဲ့ဟာလိုမျိုးဆိုတော့ မြင်တာနဲ့ လီးကတန်းတောင်ချင်လာတာဗျာ.
ဒီလိုနဲ့ သောက်ရင်းတယောက်၁ဗူးကုန်ပီး နောက်ဗူးလဲ ဖွင့်ရော ကျနော်ဆော်ကြီးက စရစ်တော့တာပဲ ( မောင်နော် ဒီနေ့ မှဖောင်းကားနေတာပဲ) တဲ့ ဟုတ်ပါရဲ့အောက်ငုံ့ ကြည့်မှ အာလာဒင်ဘောင်းဘီထဲက ဖောင်းထနေတဲ့ ကိုယ့်လီးကို သတိထာူမိတော့တယ် အ့လိုပြောတော့ သူ့ သူငယ်ချင်းကပါ စိုက်ကြည့်ပီး ( ခ်ခ်ခ်..) ဆိုပြီးရီပါရောဗျာ .အ့နဲ့ ကျနော့်ဆော်ကြီး ကဆက်ပြောတယ် ( မောင့်အကြိုက် ဆော်ကြီးတပွေပါလာတယ်) ဆိုပြီး ( ဖီးလ်တွေတက်နေတာလားမောင် ပြစမ်းကွာ) မသီရိကအတင်းဘောင်းဘီဆွဲချွတ်တော့ မထူးဘူးဆိုပြီး ချွတ်ပေးလိုက်တော့ ကျနော့်လီးကလဲ တန်းခနဲကိုကန်လာရောဗျာ. . .
မသင်ဇာကလဲ ( အိုးးးးး ) ဆိုပြီးထအော်ပါလေရော မသီရိက “မောင်စိတ်လျော့ထား” ဆိုပီး အနောက်ကနေဖက်ပီး သူ့ ရင်ခွင်ထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ် လီးကိုတွော့ဆွနေရင်းနဲ့(သင်ဇာ ငါ့ဘဲလေးလီးကိုစုတ်ချင်ဘူးလားးးဟာ) (သီရိနင်မူးရင်ငြိမ်ငြိမ်နေနော် ငါ့လာမဆွနဲ့ သေနာမရဲ့ ) (သင်ဇာငါကောင်းပြောနေတာ နင့်ငါ့ဘဲလီးကို စုတ်ချင်စုတ်) (နင်တကယ်ပြောနေတာလားသီရိ) ( အေးပါဆိုဟာ နင့်လင်နဲ့ ကွဲထားတော့ ဆာနေမှာ သိတရ်) (မောင် ရေဒီနေ့ တော့ မကိုကော သင်ဇာ့ကိုကော မယားတော်ပြီး ကောင်းကောင်းလေး လိုးပေးနော် မောင်) ( ဟင် မ တကယ်ပြောနေတာလား… )
ကျနော်လဲ ရှက်မနေတော့ပဲ ဒဲ့ပဲ ပြောချလိုက်တော့တယ်… ( အွန်းပေါ့… သင်ဇာ့ကိုခေါ်လာတာ မောင့်ဆန္ဒကို ဖြည့်ပေးချင်လို့လေ ပြီးတော့ သူလဲဆာနေမှာပဲ ဆိုပြီး ကိုယ်ချင်းစာလို့ သနားလို့..) ( သီရိ..နင်ကလေအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ… အ့ကြောင့် အရမ်းချစ်နေရတာ..) ဆိုပြီး… မသီရိရဲ့နောက်ကနေထပ်ဖက်ထားတယ်.. အဲ့တော့ ကျနော့်ကိုမသီရိကဖက် မ ကို မသင်ဇာက ဖက်ပေါ့…မ က ကျနော့်ကို အဝတ်အကုန်ချွတ်ခိုင်းတာနဲ့ ထပြီးချွတ်ရင်း အကြံတခုရတာနဲ့…. ထမင်းစားခန်းထဲက ခုံနှစ်လုံးယူပီး သူတို့ကို ထိုင်ခိုင်းရင်း ရှေ့တည့်တည့်မှာ ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ ရပ်နေမိတယ်… ပြီးတော့းသူတို့အနောက်ကိုသွားပြီး တယောက်ပုခုံးတဖက်ဆီပေါ် လက်တင်ပီး နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ကြားထဲ တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တရ်
( အခုကစပြီးစိတ်ကိုလျော့ထားနော် သက်တူရွယ်တွေလိုပုံစံနဲ့ ကဲကြရအောင်… သီရိနဲ့သင်ဇာ ငဆက်လို့ပဲ ခေါ်တော့ အခုကစပြီး…) ပြောနေရင်းနဲ့ပဲ လက်တဖက်စီက နို့တစ်လုံးစီပေါ်ကိုဖွဖွလေး ဖြစ်ညှစ်ပေးရင်း ( အိုး…ရှယ်ပဲဟာ အိစက်နေတာနို့တွေက ငါ့ချစ်သူနှစ်ယောက်လုံး ကိုချစ်တယ်ကွာ…. မွမွ..) ဆိုပြီး တယောက်ကိုတခါနမ်းလိုက်တယ်… (အခုကစပြီး သီရိနဲ့သင်ဇာ လို့ပဲသုံးပါတော့မယ်) နမ်းပြီးတာနဲ့ သူတို့အရှေ့ကိုပြန်လာပြီး ခါးကို ကော့လို့ ဘောင်းဘီတိုထဲက လီးကိုတင်းတင်းလေး စုတ်ကိုင်ရင်း အပြင်ကိုထုတ်လိုက်တရ်
( အိုး ပစ္စည်းကရှယ်ပဲငဆက်ရာ… နင့်ဆော်ဖြစ်ရတာ ထီပေါက်သလိုပဲ… သီရိ ငါတို့ဘဲလီးကြီး ကြိုက်ရဲ့လား….) သင်ဇာကတော့ တခုလပ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြောရဲဆိုရဲတယ်ဗျ… ( ကြိုက်တာပေါ့ သင်ဇာရာ… အဲ့လီးကြီးမြင်ြ့ပီး စောက်ရည်တောင်စိမ့်နေပြီ..) (နင်တို့လဲ အကုန်ချွတ်တော့လေဟာ… ) ဆိုပြီး လီးအတောင်လိုက်နဲ့ ခါးထောက်ပြီး ကြည့်နေလိုက်တယ်… ( အိုးသီရိရယ် ငါလဲစပက်ထဲကတော်တော် ယားလာပြီဟယ်…) ဆိုပြီး သင်ဇာကသီရိဖက်လှည့်ကာ နှတ်ခမ်းချင်းထိပီး ကစ်ဆင်စဆွဲတော့ သီရိကလဲပြန်ဆွဲတယ်…. ပြီးတော့ ဆွဲနေရင်း အားမရတော့မတ်တပ်ရပ်ပြီး အတွဲတွေဆွဲသလိုကို အားရပါးရဆွဲတော့တာ တယောက်ဖင်တွေ တယောက်ညှစ်လိုက်… ပွတ်သတ်လိုက်နဲ့ ကြည့်ရတာတော်တော့်ကိုအရသာရှိတယ်ဗျာ…
နှစ်ယောက်လုံးဖီးလ်တွေအရမ်းတက်နေတော့ ရှယ်ကိုကိုင်လိုက် နယ်လိုက် ဆွဲလိုက်နဲ့ အားရစရာကြီးပဲ…. ဆွဲနေရင်းနဲ့ သင်ဇာကသီရိကို ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်ရင်းနဲ့ လည်တိုင်တွေနား နမ်းလိုက်…. နားထင်နားကို လျှာနဲ့ထိုးလိုက်လုပ်နေတော့တယ် တဖြည်းဖြည်းနို့နားရောက်လာတော့ စူပြီးထွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို သွားလေးနဲ့ မနာအောင် ဖွဖွလေးဖိကိုက်လိုက်တော့ ( အား… သင်ဇာရာ ကောင်မ အရမ်းလိုက်တာ…. ငါ့နို့ကြီးတင်းနေပြီ…. ကျန်ျဲ့တဖက်လဲ နယ်ပေးဟာ အားရပါးရ…ငါ့စောက်ပတ်လည်း ယားယား အာ ဟား….) ပြောနေရင်းတန်းလန်းမှာပဲရုတ်တရက် သင်ဇာက အောက်ဖက်ကို လျောဆင်းပြီး စောက်ပတ်နားကို ပါးစပ်လေးတေ့ပီး ဆွဲစုပ်လိုက်တော့ သီရိ စကားတောင်မဆက်နိုင်တော့ဘူး… လက်နှစ်ဖက်ကလဲ အားရပါးရကို နို့နှစ်လုံးကို ညှစ်ထားတာ…
( အား….. အား…. ရှီး….. ထွက်ချင်နေပြီ မရတော့ဘူး… အားအား…. ဟင့်ဟင့်ဟင့်…. ဆက်ရေ ကယ်ပါအုံး အားဒ..) သီရိဘယ်လောက်အော်အော် သင်ဌာက စောက်ပတ်နားမှာ ပါးစပ်တေ့ပိး စောက်စိစုပ်တာက မရပ်ဘူး… ကြည့်လို့တော့တော်တော်ကို ကောင်းတာဗျာ… ဒီလိုမျိုးဆော်နှစ်ပွေအပြင်မှာ လုပ်ျာကို မြုဖူးချင်နေတာကြာပြီ… အခုလက်တွေ့မြက်လိုက်ရတော့ ထင်ထားတာထက်တောင် အရသာရှိနေသေးတယ်….. သင်ဇာလဲ မောလာတယ်ထင်တယ် စောပ်စိစုတ်နေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး….
( ငဆက် နင်အိပ်ယာပေါမှာ အမြန်လာလှဲအိပ်လိုက်..) ဆိုတော့… မြန်မြန်ပဲလှဲလိုက်တယ်…. ( သီရိနင်မြန်မြန်တက်ဆောင့်တော့. ) သီရိလဲ ထကျနော့်ကိုကျောပေးရက်နေပြီး လီးနဲ့ စောက်ထုတ်ကိုတေ့ပီး တခါထဲကိုထိုင်ချလိုက်တာ… ( အား…. သီရိဆောင့်စမ်းဟာ ငဆက်ကို အသေဆောင့်စမ်း…) သင်ဇာကအဲ့အချိန် သီရိရဲ့ ရှေ့မှာမတ်တက်ရပ်ပြီး သီရိရဲ့ဆံပင်တွေကိုစုပီးကိုင်ရင်း သူ့စောက်ပတ်နဲ့ သီရိရဲ့မျက်နှာကိုပွတ်တော့တယ်
( အွန်း… အွန်း…. ) သီရိမှာမအော်နိုင် သင်ဇာက သူ့စောက်ပတ်နဲ့ ပါးစပ်ကို အတင်းဆွဲပွတ်နေတော့…. (အား အား…. အား…. ယက်ယက် အသေယက် ကောင်မှာထွက်တော့ မယ် အား ရှီး….. ရှီး….. အား….) ( ဖွတ်ဖွတ်ဖွတတ်….. အားဒ ပြွတ်ပြွတ်…. အား…. ကောက်းတယ်..) သီရိကိုယ်လုံးလေးဆန့်ငင် ဆန့်ငင်ဖြစ်ရော သင်ဇာပါ…. ခါးကြီးကော့ပီး သိရီဆို ပုိတွေ အတင်းဆောင့်ဆွဲရင်း. သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ပြိုင်တူပြီးသွားတော့တယ်….. —————————————— #bobbyxtet
0 comments on “မောင့်အကြိုက်”
← ကျနော်နဲ့ မမ
Total visitors : 159,247
Total page view: 379,242